Izindaba - Amanothi wokuthi ungayisebenzisa kanjani iteyipu yokunisela umugqa ophindwe kabili!
Amanothi wokuthi ungayisebenzisa kanjani iteyipu yokunisela umugqa ophindwe kabili!
I-1.Uma itheyiphu yokunisela ngenkasa isetshenziswa ngaphansi kwefilimu yezolimo, ngenxa yokukhanya kwelanga, amanzi angaphezulu azohwamuka, bese ehlangana abe ngamaconsi amanzi amancane kwifilimu yezolimo. La mathonsi amanzi amancane azokwakha ilensi. Ngaphansi kwezimo ezifanele zebanga nokukhanya kwelanga, amaconsi amanzi Ukugxila kwelensi kuzokwakha indawo eshisayo, ezoshisa itape tape noma ishise imbobo encane. Ukuvikela lolu hlobo lwenkinga ukuthi lungenzeki, kufanele kuthathwe izinyathelo zokuqapha ezilandelayo lapho usebenzisa:
Sebenzisa ifilimu le-mulch elimnyama, ifilimu ye-mulch emnyama ihamba phambili, uma usebenzisa ifilimu ye-mulch esobala, kufanele ungcwabe ithebhu ye-drip ngokujulile noma umboze isembozo ngongqimba oluncane lomhlabathi ukuvimbela ukukhanya okuqinile ekungeneni kwefilimu yesembozo.
Lapho usebenzisa, gcina izinga lomhlabathi ngangokunokwenzeka, bese ufaka inani elifanele lomuthi wokubulala ukhula ngaphambi kokuvela emhlabathini ngaphambi kokutshala ukuvimbela ukhula ekukhuleni noma emabhuloki enhlabathi ekubambeni isembozo, okwenza umusi wamanzi uqoqane kulokho yakha amaconsi amanzi amancane.
2. Izinambuzane eziyizinambuzane kufanele zifuthwe ngenani elifanele lokubulala izinambuzane lapho izilimo zikhula, futhi izibulala-zinambuzane kufanele zibulawe ngesikhathi esifanele ukuvimbela izitshalo namabhande okuchelela ukuthi angalunywa futhi alimale.
3. Lapho iteyipu yokunisela idriphu ifakwa ngemishini, kuyadingeka ukuvimbela ithephu yokunisela yedriphu ukuthi ingaklwebheki futhi ihlungwe imishini.
4. Lapho ubeka iteyipu yokunisela yokunisela, uhlangothi olunokudonsa kufanele lubheke phezulu, futhi amandla kufanele afane lapho elulwa, futhi itheyiphu yokunisela ngenkasa kufanele igcinwe iqondile ngokwemvelo.
5. Imisebenzi yokulima ngomshini ayivumelekile ensimini yonke, futhi kwenqatshelwe imishini nemfuyo ukuchoboza noma ukunyathela ibhande lokunisela ngenkasa.
6. Amanzi wokunisela wokudonsa angena ebhandeni lokunisela lokudonsa kufanele acutshungulwe ngohlelo lokuhlunga olungaphezu kwama-100 mesh.